Daabacaadda cusub ee BIM: BIM luqad fudud - Geofumadas
Daabacaadda cusub ee BIM: BIM luqad fudud
Disember, 2017 dhowr
The Press Institute Bentley, editor of tiro balaadhan oo ah buugaagta iyo shuqullada tashi xirfadeed ka go'an in horumarka BIM codsatay in beeraha kala duwan sida naqshadaha, injineernimada, dhismaha, hawlaha, geospatial iyo waxbarashada, ayaa maanta ku dhawaaqay in la heli karo ee horyaalkiisa cusub, BIM luqad fudud, hadda waxaa la heli karaa sida daabacaadda daabacaadda iyo sida eBook for qalabka Kindle iyo qalabka Apple.
Vinayak Trivedi, oo ah madaxweyne ku xigeenka Machadka Bentley ayaa yiri, "Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dadweynaha u soo bandhigno cinwaankan muddo dheer sugaya ee ka socda Machadka Bentley Press: BIM luqad fudud by Iain Miskimmin, mid ka mid ah khabiiradayada ka socda Akadamiyadda Horumarinta BIM. Iyadoo intaa dheer ee ku jirta maktabadayada, Machadka Bentley Press wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ka qaybqaato horumarinta xirfadaha kala duwan iyada oo loo marayo daabacaadda caalamiga ah ee kaabayaasha, oo laga heli karo qaabab daabacan iyo qaab digital ah. Daabacaadyadani waxay kobcinayaan isgaadhsiinta warshadaha, cilmi-baarayaasha iyo ardayda, waxayna dhisaan Bentley oo ka mid ah khibradaha sannadaha 30 ee khibradaha kaabayaasha. "
Sababtoo ah BIM waxay hagaajinaysaa awoodda ay u leedahay in ay maareyso, soo saarto oo isticmaasho macluumaadka ku saabsan hantida kaabayaasha (dhismaha, dhismaha, hawlaha iyo dayactirka) inta lagu gudajiro wareeggeeda nolosha, tirada sii kordhaysa ee dawladaha adduunka ku nool waxay dalbanayaan heerarka heerka BIM 2 iyo sidoo kale natiijooyinka soo-saarka mashaariicda lagu maalgelin doono dadweynaha. Hirgelinta guuleysiga ee istaraatiijiyada BIM waxay keeni kartaa kaydka kharashka badan, waxqabadka wanaajinta iyo natiijooyinka wanaagsan ee mashruuca. BIM luqad fudud Waxay faa'iido u leedahay kuwa bilowga ah iyo kuwa leh waayo-aragnimo la leh xeeladaha BIM si loo hubiyo in dhammaan xirfadlayaasha si buuxda u diyaargaroobaan inay qayb ka noqdaan dadaalka warshadaha ee diirada saaraya horumarinta BIM.
BIM luqad fudud waxay ku xirantahay sannado badan oo khibrad iyo duruus ah laga bartey Akademiga Horumarinta BIM ee Machadka Bentley. Hanuuniyo akhristaha dhex badnida badan oo bixiya habka BIM, iyada oo luqad fudud, fahamka fikradaha iyo blocks dhismaha loo baahan yahay si loo gaaro istiraatiijiyad wax ku ool ah. Waxay muujinaysaa sababta ururinta xogta ku saabsan hantida waa mid muhiim u ah geedi socodka BIM ah, iyo sababta lagu kalsoonaan karo iyo macluumaad lagu kalsoonaan karo, u dhiibay in la fahmi karo iyo consumable, waxaa muhiim ah in go'aan qaadashada wax ku ool ah: warsiinta, horumarinta, bedelka, ka saarida ama ka tagaan hantida inta ay yihiin.
BIM luqad fudud Waxa kale oo ay sahamisaa saddexda arrimood ee abuuritaanka habdhaqaaqa wanaagsan ee BIM: dadka, habka, iyo teknolojiga. Waxay sharraxaysaa sida isku-dhafka arrimahani ay door muhiim ah uga ciyaaraan wareegga shaqada ee hantida iyo keenista natiijooyin wanaagsan. Buuggani wuxuu sidoo kale eegayaa "siddeed tiir oo ka mid ah xigmadda BIM" ee hubiya hababka ugu wanaagsan ee BIM iyo aragtida guud.
Qoraaga Iain Miskimmin ayaa faahfaahin ka bixiyay, "Fikradda hadda ee warshadaha ee adduunka dhijitaalka ahi waxay u socotaa si deg deg ah oo isbeddel leh. Laakiin casharradii aan ka baranay Akadeemiyadda BIM iyo inaan annaguna kula wadaagno buuggan waa meel aad u fiican oo laga bilaabi karo shakhsi kasta ama urur kasta oo doonaya inuu qabsado labadaba sababo heer sare ah iyo faahfaahinta BIM. "
Sida jumladaha oo idil ee ururinta Machadka Bentley Press, BIM luqad fudud Ujeeddadiisu waa inay bixiso barasho joogto ah oo caawisa ardayda iyo kuwa ugu khibrad badan ee xirfadaha kaabayaasha si kor loogu qaado khibradooda iyo hagaajinta waxqabadkooda shaqo gudahood.
Qadar qiimo leh oo waayo-aragnimo leh oo BIM ah oo kakooban ayaa ku soo baxa daabacaddan khafiifka ah oo la awoodi karo. BIM luqad fudud hadda waa la heli karaa sida buug daabacan www.Bentley.com/books, iyo sidoo kale sida eBook eBook iyo iTunes.
Ku saabsan qoraaga iyo Editor ah
Qoraaga Iain Miskimmin Wuxuu qeyb ka qaatay labaatankii sano ee ugu dambeeyay ee ka shaqeynayay taageeridda dhismaha iyo warshadaha dhismaha, isaga oo gacan ka geysanaya bixinta mashaariicda ugu horreeya ee BIM ee UK. Tan iyo 2012, wuxuu maamulay Akhriska Macluumaadka Crossrail / Bentley iyo BIM Breakthrough Academy ee London. Jagadani waxay u ogolaatay inuu dhexgalo wax ka badan dadwaynaha 4.000 aduunka oo dhan si ay u qabtaan fekerkooda iyo khibradooda ku saabsan tiknoolajiyadda BIM, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah mashaariicda ugu weyn ee dhismaha ee adduunka. Waxa uu si dhow ula shaqeeyay kooxda UK BIM oo wuxuu hogaaminayaa Qaamuuska Macluumaadka Hanti Dhaqameedka ee loogu talagalay barnaamijka UK (IADD4UK).
Tifatiraha Bill Hoskins Wuxuu ahaa naqshad xirfadle ah oo loogu talagalay sanadaha 25. Inta lagu jiro wakhtigan, wuxuu ku lug lahaa CAD (2D iyo 3D). Ku lug lahaanshahan waxay keeneen inuu horumariyo waayo-aragnimo dheeraad ah ee warshadaha kombiyuutarka. Wuxuu baranayay barnaamijka Visual Basic iyo SQL iyo in la horumariyo database. Wuxuu ka caawiyay London 2012 inuu abuuro rakibo xog-ururin ah oo lagu keydiyay dhamaan dukumiintiyada dhismaha Dhismaha Olombikada kadibna wuxuu qeexay geeddi-socodkii loo isticmaalay kooxdii haysay xarunta. Intaa waxaa dheer, wuxuu ahaa la-taliye kaas oo naqshadeynayay rakibidda database-ka Underground ee London si loo hubiyo in ay si buuxda ula socotay BS 1192-2007.
Ku saabsan Bentley Press Institute
Bentley Institute Press waa hogaamiyaha aqoonta ee bandhiga buugaagta iyo shuqullo xirfadeed tixraac loogu talagalay horumarinta Isboortiga, injineernimada iyo dhismaha (AEC), hawlaha, geospatial iyo bulshooyinka waxbarasho ah. Calaamad A ee ay liiska sii kordhaysa ee horyaal oo ka mid ah buugaagta daboolaya MicroStation, falanqaynta iyo naqshadda dhismayaasha, dhismaha, wadooyinka iyo dhirta goobta design, falanqaynta dhismaha iyo design, iyo falanqaynta biyo iyo biyaha daata - oo dhan qoray khubaro in ay ka soo jeedaan farsamooyinka Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Machadka Bentley Press, booqo www.Bentley.com/books.
Post Previous«Previous Khariidado u samee oo qorshee jidka u isticmaal BBBike
Post Next Ku Xidhaan Khariidad Gaar ahaan Khariidadda Wanaagsan ee MicrostationNext »